Wasiirka Qurba Joogta DDSI Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wakiiladii Qurbajoogta U Dhalatay Deegaanka Ee Dhawaanta Uga Qaybgalay Shirwaynihii 8aad Ee XDSHSI. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Axad.12.Oct.2014, Wasiirka xafiiska qurba joogta DDS mudane Cabdibari Macalin Maxamed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay waliiladii qurba joogta ku dhaqan daafaha aduunka uga qayb galay shirwaynihii 8aad ee XDSHSI ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay xarunta gobolka Nogob ee magaalada Fiiq.
Wakiiladan qurba joogta ayaa waxay ugu horayntii uga warbixiyeen wasiirka fikirkoodii ku aadanaa sida ay u arkeen sidii uu u dhacay shirwaynihii 8aad ee XDSHSI sida dimuqoraadiyada ah ee ay u dhacday doorashadii xubnaha golaha dhexe gudiga fulinta iyo gudiga dabagalka iyo waliba guud ahaanba horumarka balaadhan ee ay ku talaabsatay xukuumada deegaanku sanadihii ugu danbeeyay .
Sidoo kale waxa ay si qoto dheer uga warbixiyeen guulaha taariikhiga ah ee uu xisbigu ka soo hooyay dhinacyada xidhiidhka dadwaynaha gudaha iyo dibadaba. Iyaga oo dhamaantood wakiiladani ugu mahadnaqay hogaaminta xisbiga horumarkan xawliga ah ee ay mudada yar ku gaadhsiiyeen guud ahaanba deegaanka waxay ku booriyeen hogaaminta in ay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda horumarineed. Dhankoodana haddii ay yihiin qurba joogta u dhalatay deegaanka ay si mug leh uga qayb qaada’nayaan horumarkaasi sida buuxa uga taamyeelay deegaanka.
Dhankiisa wasiirka xafiiska qurba joogta DDSI mudane Cabdibari Macalin Maxamed ayaa warbixin dheeli tiran oo ku qotonta guud ahaanba jihooyinka horumarineed ee xumuumada deegaanka ka siiyay wakiiladan uga qaybgalay qurba joogta shirwaynihii 8aad ee XDSHSI. Sidoo kale waxa uu wasiirku ka warbixiyay jihooyinka qorshayaasha xukuumada ee ku wajahan dhinaca xidhiidhka qurba joogta u dhalatay deegaanka.